Maxaad ka taqaanaa taariikhda caadada Påsk ama Easter? | Somaliska
Maxaad ka taqaanaa taariikhda caadada Påsk ama Easter?
Sida aad la socotaan waxaa bilaabanaya fasaxaya Påsk ama Easter iyadoo dadka Kiristaanka ah ee caalamka ku nool ay ciid u tahay. Hadaba waa maxay Påsk? Maxay sameeyaan Kiristaanka? Ciida Påsk ama Easter ayaa ah mid aad muhiim ugu ah kiristaanka iyagoo sheega in ay u dabaal dagayaan kicitaankii uu nabi ciise ka soo kacay geerida 3-maalmood ka dib markii la dilay.
Hadaba sida iska cad ciida Påsk waa mid ka soo horjeeda aragtida Muslimiinta ee Nabi Ciise (nnkh).
Asc walal jimcale waxa rabay dacwod ban harayste 7bil I haraysan tahay dna wa marney aniga iyo cunig dhalay walina jwb mu helin ninkeyga marka maxa arintas ka igtahay ado rali ah iga so jwb
Jawaab suge ayaa tahay walaal. Sugitaanka jawaabta hada wuu dheeraday sababta qaxootiga kusoo batay wadanka dartiis.
Jumacaale waad salaamantay wixii su’aalo ah ee ka baxsan Website waan ku waydiin karnaa ayaan u malaynaa adoo raaliya. wll waxaan ku imid wadankan pasapor Etiopien ah waan la gaadhay waqtigii aan dalban lahaa pasaporka wadankan ee wayn.
Isla maalinta aan codsnaayo waxaa jirda inuu iga dhacaayo kii Etiopien ka ahaa.Ma sidaas isaga oo dhacsan ayaan gayna kadhaa Migaratiosverket ka ? Mise diba ayaan u soo jadiidin karaa?Mahasanid.
Waa inaad Safaarada ithopia kutaalo stockholm kasoo jadiidisaa passporka.
WALAL suaal Ban qabaa OO mawduuca ka baxsan Waxa Jidhay in ayantan Sharci Cusub Oo ku saabsan Midaynta Reeraha Uu soo baxay kaas Oo Saamayn Ku Yeelanaya Dadka qaar
Hadaba aniga Waxa hysta Sharci Binu aadamTinimo Walalo Iyo Hooyo Oo Ethiopia joga ban u dcwoiday iyaga DNA wa mareen aniga kaliyaa dhiman Dacwadana Waxay ii xarystanthu Ku dhawaad 9bilood Marka ma ii samynayaa Sharciga Soo baxaya Bisha May Eee Lagu xadidayo Midaynta Reeraha Isoo jawaab Fadlan
Waaw Jimcaale aad iyo aad ayaan kuugu Hanbalyaynayaa, Bulshada webkaaga ku Taxan hadaad saan ugu jawaabi lahayd ama wixii ilaahay ka garansiiyo ee aad ku dhaanto walaalahaaga la wadaagi lahayd waxaad noqon lahayd webka somali ugu heer sareeyo, Khasab maaha in aad sida saxda ah uga jawaabto ama wada Garato suaalaha ay asxaabtu ku waydiiso laakiin wixii aad ka garato ama aad ku dhaanto hadaad u sheegto waa shay Bil aadanimo ah, waana websayd aan qirayo in uu Hawl adag somali u hayo, insha allah Guul ayaan kuu rajaynayaa iyo in aad Bulshadaada wax la qaybsandoontid.Mahadsanid